Klonopin vs. Xanax: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao - Zava-Mahadomelina Vs. Namana | Desambra 2021
Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Community, Company Orinasa News Fiaraha-Monina Orinasa, Vaovao Fanabeazana Ara-Pahasalamana Ny Fizahana Zava-Mahadomelina Vs. Namana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Vaovao, Wellness Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Wellness Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana
Tena >> Zava-Mahadomelina Vs. Namana >> Klonopin vs. Xanax: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Klonopin vs. Xanax: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Klonopin (clonazepam) sy Xanax (alprazolam) dia fanafody mitovy amin'izany entina hitsaboana aretina mitebiteby sy mikorontana. Ireo fanafody roa ireo dia sokajiana ho benzodiazepines, izay miasa amin'ny fampitomboana ny asan'ny GABA ao amin'ny ati-doha. Ny GABA, na asidra gaba-aminobutyric, dia neurotransmitter manakana izay mitana andraikitra lehibe amin'ny fampihenana ny hetsika ao amin'ny rafi-pitabatabana (CNS).
Samy Klonopin sy Xanax dia samy manampy amin'ny fanasitranana ireo soritr'aretin'ny fitaintainanana amin'ny famokarana vokatra mampitony sy mampitony. Na izany aza, manana fahasamihafana miavaka amin'ny faharetan'ny asa sy ny fepetra hafa mety hampiasana azy ireo izy ireo.
Inona avy ireo fahasamihafana lehibe misy eo amin'i Klonopin sy i Xanax?
Klonopin no marika marika clonazepam. Izy io dia heverina ho benzodiazepine miasa lava miaraka amin'ny antsasaky ny androm-piainany 30 ka hatramin'ny 40 ora . Klonopin dia mahatratra ny fifantohana betsaka amin'ny ra ao anatin'ny adiny iray ka hatramin'ny efatra aorian'ny nandraisany azy.
Klonopin dia misy amin'ny takelaka mahazatra amin'ny herin'ny 0,5 mg, 1 mg, ary 2 mg. Ny takelaka am-bava (ODT) dia misy ihany koa amin'ny tanjaka 0,125 mg, 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, ary 2 mg.
Xanax dia fantatra amin'ny anarana mahazatra alprazolam. Tsy toa an'i Klonopin, Xanax dia benzodiazepine mihetsika fohy ary manana antsasaky ny manodidina azy 11 ora . Ny fifantohan'ny ra dia tonga ao anatin'ny adiny iray na roa aorian'ny fitantanana.
Xanax dia misy takelaka marika sy générique misy tanjaka 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, ary 2 mg. Ny takelaka maharitra dia misy ihany koa amin'ny tanjaka 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, ary 3 mg. Ho an'ireo izay mety manana olana amin'ny mitelina takelaka, ny alprazolam dia azo faritana ho takelaka ODT na vahaolana ranoka (Intensol).
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'i Klonopin sy Xanax
Kilasy zava-mahadomelina Benzodiazepine
Brand / status generic Misy ny kinova marika sy mahazatra Misy ny kinova marika sy mahazatra
Iza no anarana mahazatra? Clonazepam Alprazolam
Inona avy ireo endrika miditra amin'ny zava-mahadomelina? Takelaka am-bava
Takelaka miparitaka am-bava Takelaka am-bava
Takelaka miparitaka am-bava
Takelaka famoahana maharitra
Inona ny fatra mahazatra? Aretina mikorontana:
Voalohany, 0,25 mg am-bava indroa isan'andro. Aorian'ny 3 andro, ny fatra dia azo ampitomboina 0.125 mg ka hatramin'ny 0,25 mg indroa isan'andro isan'andro 3 isan'andro mankany amin'ny doka kendrena 1 mg isan'andro.
1,5 mg isan'andro mizara telo fatra. Ny doka dia mety hitombo amin'ny 0,5 mg ka hatramin'ny 1 mg isaky ny 3 andro ka hatramin'ny fatra 20 mg isan'andro. Aretina mikorontana:
Vetivety na famoahana avy hatrany na takelaka ODT: 0,5 mg am-bava intelo isan'andro. Ny fatrany dia mety hitombo hatramin'ny 1 mg isan'andro isan'andro 3 ka hatramin'ny 4 andro hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 10 mg / andro.
0,5 mg hatramin'ny 1 mg am-bava indray mandeha isan'andro. Ny doka dia mety hitombo hatramin'ny 1 mg isan'andro isan'andro 3 ka hatramin'ny 4 andro ka hatramin'ny 3 ka hatramin'ny 6 mg isan'andro.
Mandra-pahoviana ny fitsaboana mahazatra? Ny faharetan'ny fitsaboana dia mamaritra ny mpitsabo anao. Ny fampiasana benzodiazepines maharitra dia tsy ampirisihina amin'ny ankapobeny. Ny faharetan'ny fitsaboana dia mamaritra ny mpitsabo anao. Ny fampiasana benzodiazepines maharitra dia tsy ampirisihina amin'ny ankapobeny.
Iza matetika no mampiasa ny fanafody? Olon-dehibe, 18 taona no ho miakatra
(Ankizy voan'ny aretin-keriny: hatramin'ny 10 taona na 65 lbs ny lanjan'ny vatana) Olon-dehibe, 18 taona no ho miakatra
Te hanana ny vidiny tsara indrindra amin'ny Klonopin?
Misorata anarana amin'ny fampandrenesana ny vidin'ny Klonopin ary fantaro rehefa miova ny vidiny!
Toe-javatra tsaboin'i Klonopin sy Xanax
Amin'ny maha-fanafody mampihetsi-po anao, Klonopin sy Xanax dia afaka manampy amin'ny fanalefahana ny soritr'aretin'ny tebiteby sy ny fikorontanana. Klonopin sy Xanax dia samy nankatoavin'ny FDA hitsaboana aretina mikorontana amin'ny olon-dehibe manana na tsia agoraphobia .
Klonopin dia nekena ihany koa hitsabo aretina misintona amin'ny olon-dehibe sy ankizy. Matetika izy io dia ampiasaina irery na miaraka amina fitsaboana hafa ho an'ny sendikan'ny Lennox-Gastaut, ny fihanaky ny atônika ary ny fanintona myoclonic. Klonopin dia azo ampiasaina ihany koa amin'ireo izay miaina fanenjehana tsy eo.
Xanax dia nankatoavina amin'ny fanamaivanana vetivety an'ireo izay manana aretina mitebiteby. Ny aretina mitebiteby dia misy ny aretina mitebiteby amin'ny ankapobeny sy ny phobia ara-tsosialy. Araka ny marika ao amin'ny FDA, Xanax dia afaka mitsabo ny tebiteby koa miaraka aminy ketraka .
Fampiasana tsy marika ny Klonopin sy Xanax dia misy ny tsy fahitan-tory, ny fangovitana lehibe, ny aretina prédenstruétal, ary ny soritr'aretin'ny tongotra tsy milamina.
toe-javatra Klonopin Xanax
fanahiana ENY ENY
Aretina mikorontana ENY ENY
Aretin-kozatra ENY tsy
mahita tory Label tsy misy Label tsy misy
Fampihorohoroana tena ilaina Label tsy misy Label tsy misy
Aretin'ny tongotra tsy milamina Label tsy misy Label tsy misy
Aretim-piterahana Label tsy misy Label tsy misy
Mahomby kokoa ve i Klonopin na i Xanax?
Amin'izao fotoana izao, tsy misy fanadihadiana mahery vaika mifampitaha amin'i Klonopin sy Xanax. Samy mandaitra ny benzodiazepine miankina amin'ny fampiasana azy ireo sy ny toe-piainana tsaboin'izy ireo.
Xanax dia mandaitra kokoa amin'ny fitsaboana ireo aretina mahazo azy. Izy io koa dia manana faharetan'ny hetsika lava kokoa, izay mety aleon'ny olona sasany.
Ny Xanax dia mety mila maka fotoana bebe kokoa isan'andro mba hitazomana ny haavon'ny ra. Mety hampitombo ny ahiana soritr'aretin'ny fisintahana .
Matetika ny tebiteby sy ny fahaketrahana dia miara-mitranga matetika, ny benzodiazepines dia matetika azo omena miaraka amin'ny antidepressant. Ao anaty iray meta-analysis , ireo izay manana aretina mitebiteby (GAD) dia niaina tombony bebe kokoa rehefa nanomboka tamin'ny benzodiazepine sy antidepressant miaraka, farafaharatsiny voalohany.
Zava-dehibe ny mahatakatra fa ny fitsaboana amin'ny benzodiazepines dia samy manana ny azy manokana. Manantona mpitsabo anao raha mila torohevitra momba ny safidy tsara indrindra amin'ny fahasalamanao.
Te hanana ny vidiny tsara indrindra amin'ny Xanax?
Misorata anarana amin'ny fampandrenesana ny vidin'ny Xanax ary tadiavo rehefa miova ny vidiny!
Fampitahana sy fampitahana ny vidin'ny Klonopin vs. Xanax
Klonopin dia fanafody presktera azo vidiana amin'ny endriny mahazatra na marika. Ny takelaka Generic Klonopin matetika dia rakotry ny drafitra Medicare sy ny fiantohana. Ny salan'isa antonony amin'ny vidin'ny fivarotana Klonopin mahazatra dia manodidina ny 45 $. Ny fampiasana karatra fihenam-bidy dia afaka mampihena ny vidin'ny vola eo amin'ny $ 14 na latsaka.
Xanax koa dia misy amin'ny takelaka generic sy marika. Ho an'ny takelaka generika Xanax famoahana eo noho eo, ny vidin'ny antsinjarany dia mety hahatratra hatramin'ny $ 63. Na izany aza, amin'ny karatra fihenam-bidy SingleCare, ny vidiny any am-paosy dia azo ahena ho latsaky ny $ 15 amin'ny fivarotam-panafody sasany. Ny vidin'ny fanafodyo amin'ny ankapobeny dia miovaova arakaraka ny fivarotam-panafody tianao sy ny isan'ny takelaka azonao.
Voasaron'ny fiantohana mahazatra? ENY ENY
Matetika rakotry ny Medicare? ENY ENY
Fatra mahazatra Takelaka 1 mg Takelaka 1 mg
Copie Medicare mahazatra $ 0– $ 24 $ 0– $ 362
Sarany SingleCare $ 14- $ 16 $ 13- $ 23
Ny voka-dratsin'ny Klonopin vs. Xanax
Ny voka-dratsin'ny Klonopin sy Xanax izay mahazatra indrindra dia misy ny fahantrana sy fahaketrahana. Ireo izay mandray Klonopin na Xanax dia mety hiaina reraka, fanina na hazavana, fahaverezan'ny fandrindrana, ary fahasimban'ny fahatsiarovana . Ny vava maina koa dia voka-dratsy iraisana mifandraika amin'ny Klonopin sy Xanax.
Ny voka-dratsy ateraky ny benzodiazepine dia mety hahitana tory, fisafotofotoana, fanintona, fahalemena ary fahasembanana miaina. Ny voka-dratsy lehibe dia mety hitranga amin'ny fihoaram-pefy na rehefa tsy raisina araka ny voalaza ny fanafody.
rendremana ENY 37% ENY 41%
fahaketrahana ENY 7% ENY 14%
fanina ENY 8% ENY roa%
havizanana ENY 7% ENY > 1%
Very ny fandrindrana ENY 5% ENY > 1%
Fahalemem-pahatsiarovana ENY 4% ENY > 1%
Vava maina ENY * tsy notaterina ENY dimy ambin'ny folo%
Mety tsy lisitra feno ity. Manantona ny dokotera na farmasinao raha misy vokany mety hitranga.
Loharano: DailyMed ( Klonopin ), DailyMed ( Xanax )
Fifandraisana zava-mahadomelina an'ny Klonopin vs. Xanax
Klonopin sy Xanax dia metabolisma indrindra, na voahodina, ao amin'ny atiny amin'ny alàlan'ny anzima CYP3A4. Ny mpampitohy CYP3A4 dia afaka mampitombo ny haavon'ny rà amin'ireo benzodiazepine ireo, izay mety hiafara amin'ny voka-dratsy. Ny mpamadika CYP3A4 dia misy antifungaly toy ny ketoconazole ary koa antibiotika toy ny erythromycine.
Ny inducers CYP3A4 dia afaka manafaingana ny metabolisman'ny Klonopin na Xanax ary, amin'ny farany, mampihena ny fahombiazany. Ny inducers CYP3A4 dia misy fanafody anticonvulsant toy ny phenytoin sy carbamazepine, ankoatry ny hafa.
Satria i Klonopin sy i Xanax dia manana CNS ketraka vokany, izy ireo dia afaka mifandray amin'ny fanafody hafa izay misy vokany mitovy amin'izany. Ny fihinanana benzodiazepine miaraka amina zava-mahadomelina toy ny opioid sy ny antidepressants tricyclic dia mety hampitombo ny fatin'ny hodi-tory mafy, ny fahaketrahana amin'ny fisefoana ary koa ny fahafatesana, indrindra amin'ny fatra be.
RONGONY Kilasy zava-mahadomelina Klonopin Xanax
Nefazodone Mpanakana CYP3A4 ENY ENY
Lamotrigine Mpamporisika CYP3A4 ENY ENY
Tramadol Opioid ENY ENY
Imipramine Antidepressants Tricyclic ENY ENY
Mety tsy lisitra feno amin'ny fifangaroana zava-mahadomelina io. Manantona dokotera amin'ny fanafody rehetra mety ho raisinao.
Fampitandremana avy amin'i Klonopin sy Xanax
Samy Klonopin sy Xanax dia samy manana fampitandremana amin'ny marika momba ny fampiasana zava-mahadomelina momba ny fampiasana benzodiazepines miaraka amin'ny opioid . Ny fitambaran'ny benzodiazepines sy opioid dia mety hitarika ho amin'ny fampitoniana, fofonaina ambany, koma ary fahafatesana. Noho io antony io dia tsy tokony hiaraha-mitondra ireo fanafody ireo. Raha tsy maintsy entina miaraka izy ireo dia tokony harahi-maso na amboarina ny dosie mba hiantohana ny fiarovana.
Benzodiazepines - antsoina indraindray hoe benzos - dia matetika no iharan'ny fanararaotana. Ireo izay manana tantaram-panararaotana zava-mahadomelina taloha dia mety hitera-doza bebe kokoa amin'ny fanararaotana sy fiankinan-doha amin'ny benzodiazepines. Klonopin sy Xanax dia Fandaharana IV zava-mahadomelina araka ny fanasokajian'ny DEA any Etazonia.
Benzodiazepines dia natao hampiasaina vetivety ary tsy tokony hajanona tampoka. Ny fijanonana amin'ireto fanafody ireto raha tsy manadio ny fatrany dia mety hiteraka soritr'aretina.
Amin'ny tranga henjana dia mety hampidi-doza ny soritr'aretin'ny fisintahana ary ao koa ny fitaintainanana, ny tsy fahitan-tory ary ny fanintona. Noho ny toetran'ny Xanax manao asa fohy, ny fisintahana dia mety hitranga amin'ny Xanax raha oharina amin'i Klonopin.
Fanontaniana napetraka matetika momba ny Klonopin vs. Xanax
Inona no atao hoe Klonopin?
Klonopin dia benzodiazepine efa ela niasana izay nankatoavin'ny FDA hitsaboana aretina mikitroka sy fikolokoloana. Azo alaina amin'ny takelaka famoahana eo no ho eo sy am-bava. Ny Klonopin dia azo ampiasaina amin'ny aretin'ny fikomiana amin'ny olon-dehibe 18 taona no ho miakatra ary koa ny ankizy hatramin'ny 10 taona.
Inona ny Xanax?
Xanax dia benzodiazepine miasa fohy izay ampiasaina hitsaboana aretina mikorontana sy aretina mikorontana. Izy io dia toy ny takelaka am-bava, takelaka vaky am-bava, takelaka lava-famoahana, ary ranon-dra. Xanax dia voatendry matetika amin'ny olon-dehibe 18 taona no ho miakatra.
Mitovy ve i Klonopin sy i Xanax?
Klonopin sy Xanax dia tsy mitovy. Klonopin dia maharitra kokoa amin'ny vatana raha oharina amin'ny Xanax. Ny Klonopin dia azo ampiasaina ihany koa hitsaboana karazana fanintona sasany amin'ny olon-dehibe sy ankizy.
Tsara kokoa ve i Klonopin na i Xanax?
Samy Klonopin sy Xanax dia fitsaboana mahomby amin'ny soritr'aretin'ny tebiteby sy ny fikorontanana. Klonopin dia azo alaina indray mandeha na indroa isan'andro amin'ny tranga sasany raha toa ka Xanax dia mety mila maka imbetsaka isan'andro. Ny soritr'aretina misintona dia mety hitranga amin'ny Xanax. Manantona dokotera hamaritana ny safidinao tsara indrindra.
Afaka mampiasa Klonopin na Xanax ve aho rehefa bevohoka?
Klonopin sy Xanax dia matetika no tsy tokony hampiasaina mandritra ny fitondrana vohoka. Misy ny mety antony mahatonga ireo fanafody ireo kilema nahaterahana . Mpitsabo matihanina maro no manoro hevitra ny hisorohana ny benzodiazepine raha bevohoka ianao. Zahao amin'ny mpitsabo anao raha misy safidy azo atao raha bevohoka ianao.
Azoko atao ve ny mampiasa Klonopin na Xanax amin'ny alikaola?
Ny alikaola dia afaka mampifangaro ny voka-dratsin'ny Klonopin na Xanax ary mitarika fiatraikany lehibe kokoa raha miaraka. Ny fisotroana zava-pisotro misy alikaola mandritra ny Klonopin na Xanax dia mety hiteraka fatin-tory mafy, fahaverezan'ny fandrindrana ary ny fahaketrahana. Betsaka ireo Cases ny koma sy ny fahaketrahana amin'ny fahaketrahana amin'ireo izay manambatra alikaola amin'ny benzodiazepine.
Ahoana ny fahatsapanao an'i Klonopin?
Klonopin dia misy fiatraikany mampihetsi-po izay afaka manampy miala sasatra sy mampihena ny soritr'aretin'ny fitaintainanana. Rehefa avy naka an'i Klonopin ianao dia mety hahatsapa ho maivamaivana kokoa ary tsy hatahotra na ho adin-tsaina. Ireo izay miaina amin'ny fanahiana tsy tapaka dia mety hahatsapa ho afaka handeha amin'ny fiainany andavanandro tsy misy ahiahy tsy tapaka.
Mety hiteraka olana ara-pahasalamana ara-tsaina ve i Klonopin?
Klonopin dia tsy miteraka olana ara-pahasalamana mivantana. Rehefa raisina araka ny voalaza, Klonopin dia afaka manampy amin'ny fitsaboana ny fitaintainanana mampihetsi-po, ny fikorontanan'ny tahotra ary ny fikorontanana. Na izany aza, raha manararaotra an'i Klonopin ianao na miankina aminy ara-batana dia mety hahatsapa soritr'aretina misintona ianao aorian'ny fitsaharan'ny fitsaboana. Soritr'aretina misintona dia mety hahitana fiovana amin'ny fitondran-tena toy ny fahasosorana, ny fiovan'ny toetr'andro ary ny fikorontanana. Klonopin dia tokony hosoratana tsimoramora mba hisorohana ny soritr'aretin'ny fisintahana.
Sarin-tanana fampiasan-dehilahy 5 tsara indrindra
Inona avy ireo fanafody allergy OTC azoko harenina?
azonao atao ve ny tsy mahazaka lactose tara amin'ny fiainanao
mety ve ny maka zyrtec isan'andro
ny fomba ahazoana maimaimpoana ny famoahana diabeta
Firy Taona Ianao miandry eo anatrehanao maka amin 'ny drafitra
ohatrinona ny taratasiko nefa tsy misy fiantohana